छोरी मान्छे भनेको यो संसारमा राज गर्न जन्मिने हो - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
छोरी मान्छे भनेको यो संसारमा राज गर्न जन्मिने हो
Posted by Headline Nepal | ४ मंसिर २०७४, सोमबार ०८:०० |
‘ मैले भने त जति राम्रो भएपनि म आफ्नै खुट्टामा नउभिउन्जेल बिहे गर्दिन ।’ जुनुले केहि आबेशमा आएरै भनेकि थिई पोहोरको बर्ष । उसले यो पोहोरको साल मंसिरमा बोलेको वाक्य हो।मंसिर र बैसाख आएपछि घरमा यस्तै कचकच हुन्थ्यो जहिले । घरबाट बिहेको कचकच सुन्न थालेको ठिक्याकै दुई बर्ष भयो ।
उ यहि कार्तिक २७ गते देखि चौबीस बर्षकि भएकि छ । जुनु २२ बर्ष पुग्दै घरमा सबैले उसलाई बुढिभए भन्ने सोच थाल्छन् । हुन पनि हो छोरी मान्छेको उमेर निश्चित हुन्छ । तिस पुगेपछि गाला चाउरि पर्न थाल्छन । मुजा पर्न थाल्छन । स्वास्थ्यले पनि केटिमान्छेले पच्चिस बर्ष भित्र बिहे गरेको राम्रो मान्छ । उमेर गएपछि त गई गयो नि छोराछोरि पाउने सपना मात्र देखेर कहाँ हुन्छ ।
छोरी मान्छे उमेरमा बीस देखि तीसबर्ष सम्म सहि निर्णय लिन सकेनन् वा आफुभन्दा ठुलाले भनेको मानेनन् भने पछि साह्रै दुस्ख पाउछन् भन्ने उसलाई अनुभव हुन थालेको छ ।
हाम्रो सँस्कारले यहि सिकाउछ छोरी अर्काको घर जानै पर्छ । उ पनि पनि छोरि मान्छे हो । अहिले जुनुको बिहे गर्ने मोड आएको छ ।
उसले आफ्ना आँखाहरुलाई दिदिको मोबाएलमा स्क्रिनमा सम्म पुर्याई । दिदिले देखाएको फोटोमा चुस्स दारि पालेको केटोको फोटो थियो ।
‘कहाँको हो केटा ? जुनुले बुझ्न खोजी ।’
‘यतै हो ! गोकंण छेउ ! काममा हिडि रहन्छ । सिन्धुपाल्चोक तिर काम गर्छ । मेरो साथिको भाई हो ।’
‘इन्जिनियर हो ।’
दिदीले इन्जिनियर भन्ने बित्तिकै उसको मन अमिलो भयो । एकजना इन्जिनियर पढेदै गरेको केटाले उसलाई प्रेम गर्थ्यो । पछि आफैले छोडेर गयो । उसले मलाई किन छोड्यो भनेर उ भन्न सक्दिन । सायद पढाईको तनाब हुन सक्छ । आजकाल त प्रेम पनि यौन बनेको छ । कति छोरामान्छेहरु यौनकै लागि प्रेम गर्छन । उसले के को लागि प्रेम गर्यो उ जान्दिन । केहि हद सम्म उ यो ठोकुवा गरेर भन्न सक्छे उसको प्रेमिले उ सँग कुनै यौन प्यास मेटाउन पाउने संकेत देखेन । उ राजी थिइन ।
सबैको आ-आफ्नो बिचार हो पेसामा उसलाई मासुपसल , पठाई र काममा इन्जिनियर मलाई मन पर्दैन । कसैको ज्यान मारेर ब्यापार गर्नु पेशा भएरै मन माशु ब्यापार मन पर्दैन । इन्जिनियर मन नपर्नुको कारण उ इन्जिनियर लाई कुनै एक बेला प्रेम गर्थे र उसले धोका दियो । तर सबै इन्जिनियर खत्तम हुन भरेर भन्नु खराब हो ।
उसले दिदीलाई असहमतिको टाउको हल्लाई ।
‘इन्जिनीयर हो ,खान्दानी परिवार छ । कसैसँग प्रेम छ भन्दा पनि छैन भन्छेस । केटा हेर राम्रै पनि छ कस्तो खोज्छेस त यो भन्दा ?’ दिदीले यति भनि सकेपछि दिदीको मुख आँ नै भर्इ राख्यो ।
जुनु केहि बोलिन उसले केटाको परिवारको बारेमा बताउँदै गई, उ सुन्दैगई । परिवार, काम ,घर गाडि यस्तै यस्तै ।
जुनुलाई आफ्नो परिवार भन्दा माथिलो दर्जा, पुँजीवाल धनीहरु सँग बिहे गर्न मन छैन । खाइसियोस् गइसियोस् बोल्नेहरु उसलाई मन नै पर्दैन । आदर सत्कार गर्नै जानिदैन भन्ने सोच छ । आफु भन्दा माथिल्लो दर्जाका अगाडि आफुलाई बिरालोको अगाडि मुसो जस्तो भएर उ बस्न सक्दिन । धनिबाउका छोराहरु उ त्यसकारण पनि मन पराउदिन ,बाउले कमाईदिएको सम्पतिको घमण्ड हुन्छ छोराहरुलाई ।
दिदीकै परिवार सम्झिन्छे, भेना डाक्टर । बिरामी बिरामी भन्दा भन्दै समय खोइ दिदीको लागि समय । घरमा बोल्दा जो सँग पनि थरथर भएर बोल्नु पर्छ । अरुको अगाडि झुक्नै पर्छ अरुको अगाडि । भरसक नमस्ते गर्दापनि खुट्टैमा ढोगिदिएँ हुन्थ्यो जस्तै गर्छन खान्दानमा हुर्केकाहरु ।
‘मलाई अब यस्तो केटा परिवारको केटाको कुरा नगर । म एक सामान्य परिबारमा बाँकि जिवन चलाउछु । म सुख आराम सँग सुनको पिञ्जडामा बाँकि जिवन चलाउन चाहान्न ।’ जुनु यि भन्दै आफ्नो कोठा भित्र जान्छे ।
‘यसले पछि दुस्ख पाउछे ।’ जुनुकि दिदी यस्तै कुरा सोची रहन्छे तर आफु कुन सुखमा बाँचेकी छु भन्ने उसले यतिबेला सोचेकि छैन ।
कुनै खान्दानी केटिले गरिब परिवारसँग बिहे गरेर बुढा भएका आमा बा का नङ् बुहारीले काटेको कम देखिन्छ हाम्रो समाजमा ।
समाज यस्तो हल्ला गरेर बस्ने हो । फलानी छोरी त मरिछ नि । सुख नपचेको मोरीलाई । घर थियो, बगंला थियो, के कमि थियो र त्यसलाई । तर उ कसरी बाचेकि हुन्छे कमैले बुझ्छन् । ‘फलानीकी छोरी खलासीसँग पोइल गई ।’ तर यहाँ कम मान्छेले बुझेकाछन एउटा खलासी मेहेनती हुन्छ र काम गर्छ ।
तर जुनुले यहि मंसिरमा आफुभन्दा तल्लो दर्जाको केटा सँग बिहे गर्नेछे । जसले उसलाई मान सम्मान दियोस, माया दिन सकौँ र उ राज गरेर बस्न पाउने छ ।
एउटी छोरी मान्छेले जुनसुकै छोरामान्छेलाई दास बनाउन सक्ने क्षमता हुन्छ । छोरी मान्छे भनेको यो संसारमा राज गर्न जन्मिने हो । तर, आफ्नै बुद्धिले छोरी मान्छेहरु आफु धनी केटा खोज्छन, सुख खोज्छन र जिन्दगीभर दुःख सहेर अरुको दास भएर बस्छन । केहि आत्माहत्या गर्छन् ।
Previousबार्सिलोनालाई दबाब दिँदै, रियल मड्रिडलाई पछि धकेल्दै भ्यालेन्सिया
Nextजिम्बाब्बेका राष्ट्रपति मुगावे पार्टीको नेताबाट बर्खास्त
स्थानीय तहको संख्या टुंगो लागेन
२१ फाल्गुन २०७३, शनिबार ०९:५२
भारतले श्रीलंकालाई हरायो, विराट कोलही म्यान अफ दि म्याच
२२ भाद्र २०७४, बिहीबार ०८:२०
चलचित्र शिवमले पायो दर्तापत्र ! निर्देशक गिरीले भने-‘अव बिन्दासको शुटिङ सकिए लगतै शिवमको पालो’
१८ माघ २०७३, मंगलवार १२:३६
‘लिभिङ टुगेदर’ जोडीको एउटै चाहना : ‘नियमित यौनसम्पर्क पनि गर्न पाइयोस्, अनिच्छुक गर्भ पनि नबसोस्’
१३ कार्तिक २०७४, सोमबार ०९:३९